Step By Step Salah အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2022 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် APK（39.7MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Step By Step Salah - Namaz
ဆုတောင်းခြင်းကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့်သူ့ကိုကြောက်ရွံ့ရန်။ [ကုရ်အာန် 6:72] "
အားလုံးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူ။ အဆင့်ဆင့် Salah app သည်နေ့စဉ်ဆုတောင်းချက်များ, >
•အသံနှင့်အတူအလိတ်ဆုတောင်းချက်တိုင်းတွင်ခြေလှမ်းတစ်ခုစီနက်ရှိုင်းသောပုံဥပမာတစ်ခုတွင်ဗောဇ်၏အသံ AZAN Times
•အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များနှင့်အဆင့်ဆင့်။ •အသုံးပြုသူမျက်နှာပြင်တစ်ခုစီကို အသုံးပြု. ။ •မွတ်စ်လင်မ်များ Dua's နေ့စဉ်အသုံးပြုရန်အတွက်သင်၏ Tasbeeeh ကောင်တာကိုရေတွက်ခြင်းနှင့်သိမ်းဆည်းခြင်း, အဖဲွခြင်းအပလီကေးရှင်းကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးထားသည်။
ဤအစ္စလာမ်ဘာသာရပ်၏ဤအစ္စလာမ်ဘာသာရပ်၏လေ့လာမှုရလဒ်များကိုစစ်မှန်သောအချိန်ခြေလှမ်းနှင့်အတူအဓိကအတန်းငါးခုသို့ခွဲခြားထားသည် -step နည်းလမ်း:
1 ။ နေ့စဉ်ဆုတောင်းချက်များ
ဤအပိုင်းသည် Rakaat ၏သဘောသဘာဝကိုဖော်ပြထားသည် (Fard သို့မဟုတ်မဖြစ်မနေ Sunnah, Sunnah မှ Sunnah Matherakkadah, Nafl Mustahabadah, Nafl Mustahabadah) အားလုံး5ဝေါဟာရကိုတာဝန်ရှိ NAMA ဇ, IE
fajar, duhr, asr, asr, Magrhib နှင့် Isha
isha2။
2 ။ ရံဖန်ရံခါ Salah
ဒီအမျိုးအစားမှာဒီအမျိုးအစားမှာဒီအမျိုးအစားမှာ jumma ဆုတောင်းခြင်း, ဈာပနဆုတောင်းခြင်း, ဈာပနဆိုင်ရာဆုတောင်းပဌနာများ, Tasbeeeh (Salatul tasbebeah), Eid ဖုံးလွှမ်းထားသည်။
3 ။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု
Namaz အက်ပ်၏ဤကဏ္ section တွင်ယုံကြည်သူများသည် Namaz စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်လိုအပ်သောလက္ခဏာများကိုသိရှိလာလိမ့်မည်။ လေ့လာမှုများသည်ပြည့်စုံသောသန့်ရှင်းမှုများကိုထိန်းသိမ်းခြင်း, Wudu မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်,
4 ။ အဆင့်မြင့်
အဆင့်မြင့် SALAH အက်ပလီကေးရှင်းများကမူမွတ်စ်လင်မ်များအားလွဲချော်သော Salah ကိုသယ်ဆောင်ခြင်း၏အရေးပါမှုကိုသတိပြုမိစေရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဆုတောင်းစဉ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်သောအမှားများအကြောင်းအသုံးပြုသူအားသိရှိနိုင်သည်။
5 ။ Timings
ဤအပိုင်းသည် app စားသုံးသူများကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များအား Salaah အက်ပလီကေးရှင်းအားဖြင့်ခြေလှမ်းငါးဖမ်းနာခြင်းအတွက်မှန်ကန်သောဆုတောင်းခြင်းအချိန်နှင့်တပြေးညီပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ NAMA ဇသည်လက်ရှိသတင်းအချက်အလက်မတူကွဲပြားသောသတင်းရင်းမြစ်များ, တရားစွဲဆိုမှု
methods (wml, Makkad, Karfi, Karla, Tahran အီဂျစ်) နှင့် လတ္တီတွဒ်
(ထောင့်ကို အခြေခံ. ညစဉ်နေ့,) ။ လာမည့် Adhan အသံသုံးခုတွင်လာမည့် Namaz ဥပမာအားဖြင့်လည်းဖော်ပြထားသည်။
6 ။ Tasbeeeh ကောင်တာ
သင်၏နေ့စဉ် Ziker ကိုလွယ်ကူစွာရေတွက်ပြီးသင်၏ Tasbeeeh ကိုသေချာစွာရေတွက်ပြီးသင်၏ Tasbeeeh ကို SASHEEH ကို SAVEAH SALAH အက်ပလီကေးရှင်းအားဖြင့်သွားပါ။
ဆုတောင်းချက်များ (Namaz) ၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ကောင်းချီးများ (Namaz) တွင်အဆင့်ခြေလှမ်းလှမ်းခြင်းနှင့် Namaz လမ်းညွှန်အက်ပလီကေးရှင်းတို့တွင်ပါ0င်သည်။ ဆုတောင်းခြင်း၏ကောင်းချီးများသည် Jumma ဆုတောင်းခြင်း, ဈာပနဆုတောင်းချက်များ, ထို့အပြင်ဆုတောင်းခြင်း၏အရေးပါမှုကိုခြေလှမ်း Salah ၏ခြေလှမ်းတွင်ပါ0င်သည်။
Salah ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ပတ်သက်။ လုံလောက်သောသတင်းအချက်အလက်။